Health « BadalNepal
काठमाडौ । बाँसको तामा धेरैको भान्सामा पाक्ने तरकारी हो । यो स्वादका लागि मात्र नभई
धेरै खुट्टा गन्हाउने मानिसले गर्नै पर्ने यी कुरा
काठमाडौँ । हरेक मानिसहरु खुट्टा गन्हाउने समस्याले हैरानि हनुुभएको छ । गन्हाउने शब्द सुन्ने वितिकै
काठमाडौँ । हरेक मानिसहरु खुट्टा गन्हाउने समस्याले हैरानि हनुुभएको छ । गन्हाउने शब्द सुन्ने वितिकै जो कोहिलाई पनि दिक्क लाग्छ । गन्हाउने समस्याले गर्दा अरुको अगाडि जान अड लाग्ने साथि भाई संग सँगै हिडन् असजिलो महसुस हुने गर्दछ ।
बेथेको साग किन खाने ? यस्ता छन् कारणहरु
काठमाडौँ । बेथेको साग स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ
काठमाडौँ । बेथेको साग स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो प्राय मानिसहरुको भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी पनि हो ।
बेथेको सागमा थुप्रै औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । बेथेमा खनिज तत्त्वको मात्रा अमलामा भन्दा बढी हुन्छ । बेथेले शरीरमा फलामको कमी हुन दिंदैदैन । साथै, मृगौलामा पत्थरी हुन पाउँदैन । आमाशयलाई बलियो बनाउँछ । बेथेमा फलाम, फस्फोरस, भिटामिन डी र क्षार धेरै मात्रामा पाइन्छ । यो शुक्रवर्धक र कब्जियत भगाउन लाभकारी मानिन्छ ।
भोक नलाग्ने, खाना ढिलो पच्ने, डकार, पेट फुल्नेजस्ता समस्या हटाउन पनि बेथे लाभदायक हुन्छ । पिसाब, मूत्राशय, मृगौलासम्बन्धी रोग निको पार्न र छालासम्बन्धी रोगमा समेत यसको उपयोग प्रभावकारी मानिएको छ ।
गाजर खानुका फाईदाहरु
एजेन्सी । अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्यूट्रेसनमा भर्खरै प्रकाशित एक एउटा रिपोर्टले स्तन क्यान्सरका लागि
एजेन्सी । अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्यूट्रेसनमा भर्खरै प्रकाशित एक एउटा रिपोर्टले स्तन क्यान्सरका लागि गाजरको प्रयोग अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको उल्लेख छ ।उक्त रिर्पोट अनुसार जरमा पाइने विटा क्यारोटिनले स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना ४० देखी ६० प्रतिशत कम हुने देखाएको छ ।
सो अध्धयनमा १ हजार ५ सय स्तन क्यान्सर पिडीत महिला र त्यत्तिनै संख्यामा स्वस्थ महिला समावेस गरिएको थियो । सहभागिहरुमा बैज्ञानिकहरुले दैनिक रुपमा खाने खानाको सोध साथै रगतमा विटा–क्यारेटिनको मात्रा मापन गरेका थिए ।
जसबाट पत्ता लाग्यो कि जसले खानामा विटा क्यारोटिन पाइने पदार्थ जस्तै गाजर समावेश गरेका थिए तिनीहरुमा स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना ४० देखि ६० प्रतिशत कम देखियो ।एस्ट्रोजेन रिसेप्टर पोजेटिभ स्तन क्यान्सरलाई भने गाजरमा पाइने विटा क्यारोटिनले नघटाउने पाइएको छ ।यसो त गाजरले आँखा तेजिलो बनाउन तथा रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्छ ।
भुइकटहर खानुका फाईदाहरु
काठमाडौँ । भुइँकटहर स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदाजनक मानिन्छ । भुइँकटहर
काठमाडौँ । भुइँकटहर स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदाजनक मानिन्छ । भुइँकटहर हरेक मौसममा पाइने निकै स्वादिलो फल हो । यो स्वादिलो मात्र होइन निकै गुणकारी पनि हुन्छ । यसमा प्रसस्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । भुइँकटहर नियमित रुपमा खाएमा यसले सरीरलाई विभिन्न फाइदा पूराउँछ ।
भुइँकटहरका विभिन्न प्रकारका फाइदाहरु छन् । भुइँकटहरमा पर्याप्त मात्रामा म्याग्नेसियम, क्याल्सियम जस्ता लवण पाइन्छ जसले हड्डीलाई मजबुत राख्नमा सहयोग गर्दछ । ब्रोमेलेन यौगिकले हड्डीमा हुने विभिन्न खाले समस्याबाट बचाउँदछ ।
भुइँ कटहरमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ जसले पाचन क्रियालाई सहज बनाउँछ र खानेकुरा सजिलोसँग उपापचयन हुन्छ । साथै यसले अनावश्यक अम्ललाई निस्कासन गर्न र ग्यास्ट्राइटिसको समस्या पनि कम गर्छ । यसले भोक कम गर्ने हुँदा मोटोपना घटाउन समेत सहयोग गर्छ ।भुइँ कटहरमा एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व हुन्छ जसले बुढ्यौलीका लक्षणहरुलाई कम गर्ने, सरीरका कोषहरुको क्षयिकरण रोक्ने, अनुहारका दाग धब्बा तथा चाउरीपना कम गर्न सहयोग गर्छ ।
यसमा हुने भिटामिन सी ले कोलाजेन फाइबर बनाउन सहयोग गर्छ, जसले मांसपेशी र छालालाई स्वस्थ राख्दछ । यसमा हुने प्रोटिनले छालालाई चम्किलो बनाउँछ ।भुइँ कटहरमा एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व हुन्छ जसले बुढ्यौलीका लक्षणहरुलाई कम गर्ने, सरीरका कोषहरुको क्षयिकरण रोक्ने, अनुहारका दाग धब्बा तथा चाउरीपना कम गर्न सहयोग गर्छ ।
यसमा हुने भिटामिन सी ले कोलाजेन फाइबर बनाउन सहयोग गर्छ, जसले मांसपेशी र छालालाई स्वस्थ राख्दछ । यसमा हुने प्रोटिनले छालालाई चम्किलो बनाउँछ ।
निउरो निनहु सेवन गरेको खण्डमा यी रोगबाट बच्न सकिन्छ
काठमाडौ । निउरो स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ ।
काठमाडौ । निउरो स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । निउरो, धेरैजसो जंगलमा पाइन्छ । यो प्रायको भान्सन्सामा तरकालि को रुपमा पनि पाक्ने गर्दछ अझ निउरो अचार बनाउन सकिन्छ । तिख्खर स्वादको निउरो थरीथरीका हुन्छन् ।
स्वस्थ्यका लागि पनि निउरो निकै राम्रो मानिन्छ ।यसबाट भिटामिन ए, बि र सिको मात्र पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ ।निउरोमा आइरनको मात्रा पनि हुन्छ ।
त्यसैले, आँखाको दृष्टि कमजोर भएकाहरुले पनि नियमित सेवन गर्दा लाभदायक हुन्छ ।मुटु र मधुमेह रोगीहरुका लागिसमेत निउरो निकै उत्तम आहर मानिन्छ ।समयमा भोक नलाग्ने समस्या छ भने पनि नियमित निउरोको सेवन गर्दा हुन्छ । किनकी यसले भोग जगाउने काम गर्छ ।
निन्द्रा नपुग्नु पनि रोग हो ?
काठमाडौं । निद्रा पुग्नेगरी पर्याप्त नसुत्ने कलेज तहका विद्यार्थीहरुको मानसिक विकासमा समस्या हुने खतरा रहेको
अनिन्द्रकै कारण कति धेरै समस्या सृजना हुदो रहेछ भन्ने कुरा यो अध्ययनले आश्चर्य नै पर्नेगरी देखाएको उनीहरुको भनाई छ । अध्ययनको नेतृत्व गर्नु भएका लेखक थे राम्सेयले क्याम्पस तहका विद्यार्थीहरुमा यसले बढी प्रभावित पारेको बताउनु भयो । उनका अनुसार सन् २०११ देखि २०१४ सम्म गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । उहाँले अध्ययनमा एक लाख १० हजार ४९६ जना सहभागी भएको जानकारी दिए ।
डिप्रेसनको औषधी पुदीना
काठमाडौँ । पुदिना स्वास्थको लागी अचुक औषधी हो ।यसको नियमित सेबनले स्वास्थमा राम्रो फाइदा हुन्छ
काठमाडौँ । पुदिना स्वास्थको लागी अचुक औषधी हो ।यसको नियमित सेबनले स्वास्थमा राम्रो फाइदा हुन्छ । यसले खाना पचाउन सहयो गर्ने देखी सिलएर तौल घटाउने, डिप्रेसन तथा थकान घटाउने र टाउको दुखाई हटाउने लगायतका काम गर्छ। यसो त पदिना स्वास्थका लागी मात्र नभइ स्वालमा पनि मिठो हुन्छ । हामी यसको चटनी बनाएर खान सकिन्छ । त्यसैगरी पुदिनाको चिया पनि खान सकिन्छ ।स्मरणशक्ति कमजोर भएमा यसको सेवन गर्दा त्यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
यदि श्वासको दुर्गन्ध छ भने पनि यसको सेवनले हटाउन मद्दत गर्दछ । पुदीनालाई प्रयोग गरेर टुथपेष्ट, चुईङगम, क्यान्डी, इन्हेलरजस्ता औषधिमा प्रयोग गरिन्छ।स्तनपान गराउने महिलाको स्तन र निप्पलमा पीडा हुन सक्छ। अध्ययनले के पुष्टि गरेको छ भने पुदीनाको तेलले त्यस्तो पीडा कम गर्छ।पुदीनाको नियमित प्रयोगले दमका बिरामीलाई फाइदा पुग्छ। तर नाक र घाँटीलाई प्रभाव पर्ने गरी पुदीनाको बढी प्रयोग भने गर्न हुन्न।
मुलाले गर्छ शरीरलाई यस्ता फाईदाहरु
काठमाडौँ । मुला स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फादा जनक मानिन्छ ।
काठमाडौँ । मुला स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फादा जनक मानिन्छ । यो भान्सामा सजिलै उपलब्ध हुने तरकारी हो  तर यसमा अचसक औषधीय गुण हुन्छ ।मुलाले क्यान्सरको जोखिम घटाउने काम गर्छ । मुलामा प्रशस्त मात्रामा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरका कोषको डिएनए नष्ट हुनबाट बचाउँछ । साथै, नियमित मुला सेवन गर्दा पेट र आन्द्रामा हुने क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ ।
मुला पायल्सका लागि अचुक औषधि मानिन्छ । नियमित मुला खाएमा पायल्सको जोखिमसमेत कम गर्छ ।भने पाचन प्रक्रिया राम्रो गर्छ । शरीरमा हुने जलनलाई समेत कम गर्न सहयोग गर्छ ।
यसले शरीरमा पानीको आपूर्ति गर्नुका साथै मिर्गौलाजन्य रोगको जोखिम घटाउँछ । मुलामा ज्यादै कम मात्रामा मात्र क्यालोरी र फाइबर पाइने भएकाले तौल नियन्त्रण गर्न सहयोग पु९याउँछ ।
काँक्रो खानुका अपत्यारिला फाइदाहरु
काठमाडौ । काँक्रो बाह्रै महिना फल्ने एउटा फल हो । यो झालमा फल्ने गर्दछ ।यो
काठमाडौ । काँक्रो बाह्रै महिना फल्ने एउटा फल हो । यो झालमा फल्ने गर्दछ ।यो स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ । यसको सलाद बनाउदा पनि उतिकै चोपिलो हुन्छ । काक्रो सेवन जतिबेला पनि गर्न सकिन्छ । प्राय यो गर्मी मौसममा बढि सेवन हुने गर्दछ । काँक्रोको सेवन गर्दा विभिन्न किसिमका रोगबाट बच्न सकिन्छ । काँक्रोमा पानीको मात्रा ९६ प्रतिशत हुन्छ ।
सुकुमेल खादा शरीरलाई कस्तो फाईदा हुन्छ ? जान्नुहोस्
काठमाडौं । सुकुमेल स्वादका लागि मसलाको रुपमा मात्रै होइन स्वास्थ्यका लागि औषधिको रुपमा पनि प्रयोग
काठमाडौं । सुकुमेल स्वादका लागि मसलाको रुपमा मात्रै होइन स्वास्थ्यका लागि औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सुकुमेलमा औषधीय गुण हुन्छ । सास गनाउने गरेको छ भने मुखमा सुकुमेल हाली समय लगाए चुस्ने गर्नुस् । यसमा पाइने सुगन्धले सासलाई ताजा राखी दुर्गन्ध हटाउँछ ।
भोक नलाग्ने, बान्ता हुने, अपच हुने आदि समस्या छन् भने सुकुमेल खानाले कम हुन्छ । तिर्खा लागिरहन्छ अथवा घाँटी पोल्ने गरिरहन्छ भने सुकुमेल मिसाइएको पानी पिउँदा राम्रो हुन्छ ।
छातीमा कफ जमेको छ र सास लिन गाह्रो भइरहेको छ भने सुकुमेल खानाले कफ बाहिर निस्कन्छ र शरीरलाई राहत मिल्छ । रुघाखोकी लागेको छ अथवा घाँटी खसखस भइरहने समस्या छ भने सुकुमेललाई पिसेर महसँग खानुपर्छ ।
सुक्खा खोकी लागेको छ भने सुकुमेल, तोरीको तेल र चिनी मिसाएर खानुपर्छ । यसले कफ बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ । ज्वरो आएर जीउ पोलेको छ भने सुकुमेल खानाले सहज महसुस हुन्छ ।
हरियो घाँस जस्तै विषालु सर्पले टोक्दा यस्तो गल्ती नगर्नुस्
काठमाडौं । विराटनगरस्थित प्रदेशिक अस्पताल ‘कोशी’ मा सर्पले डसेका बिरामीको चाप बढेको छ । अविरल
काठमाडौं । विराटनगरस्थित प्रदेशिक अस्पताल ‘कोशी’ मा सर्पले डसेका बिरामीको चाप बढेको छ । अविरल वर्षापछि आएको बाढी र डुवानका कारण विगत १५ दिनयता सर्पले डसेका बिरामीको चाप अस्पतालमा बढेको हो । सर्पले डसेका बिरामीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको सो अस्पतालका आकस्मिक कक्षका प्रमुख डा सङ्ज्ञा ज्ञवालीले बताउनुभयो । गत वैशाखदेखि अहिलेसम्म ३१ जना सर्पले डसेका बिरामीको उपचार भएको बताउँदै उहाँले सर्पले डसेर उपचारका लागि अस्पताल आएका बिरामीमध्ये अहिलेसम्म कसैको मृत्यु नभएको जानकारी दिनुभयो ।
सर्पले डसेका अधिकांश बिरामी ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने गरेको जानकारी दिँदै डा ज्ञवालीले यस्ता बिरामीको उपचारका लागि औषधिको अभाव नरहेको बताउनुभयो ।
वर्षाको मौसममा सर्तकता अपनाउनु पर्ने, घर सफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, दुलो टाल्नु पर्ने, राति सुत्दा झुल लगाएर मात्र सुत्ने र राति बाहिर निस्कँदा टर्चलाइट बालेर मात्र निस्कनुपर्ने सुझाव डा। ज्ञवालीको छ । सर्पले डस्ने बित्तिकै झारफुक गर्ने, डसेको ठाउँमा व्लेडले चिर्नेलगायतका कार्य नगरी तुरुन्त अस्पताल आउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले जेठदेखि अहिलेसम्म २५ जना डेङ्गुका बिरामी उपचार गर्न आएको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष झाडापखाला लागेर आउने बिरामीको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा घटेको बताउनुभयो । झाडापखालाबाट बच्न सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, खानु अघि हात धोएर मात्र खाने, दूषित पानी नपिउने, बासी र सडेगलेका खानेकुरा नखाने, फलफूल र हरियो सागसब्जी सफा पानीले पखालेर मात्र खाएमा यसबाट सजिलै बच्न सकिन्छ । रासस
तपाई बेल किन खानुहुन्छ ? थाहा पाउनुस् बेल खानुका फाईदाहरु
काठमाडौ । अमिलो पानी आउने, चिया खानै नहुने रोगीले पनि नियमित बालबेलको चिया खाने गरेमा
काठमाडौ । अमिलो पानी आउने, चिया खानै नहुने रोगीले पनि नियमित बालबेलको चिया खाने गरेमा पित्तको रोग ठिक हुन्छ र यसले धित पनि मार्छ । साथै यसको सेबनले बान्ता रोक्न पनि सहयोग गर्छ ।बेलपत्रको धूलो एक चम्चामा एक चम्चा मह मिसाएर बिहान÷बेलुका खाने गरेमा दमको रोग समन हुँदै जान्छ ।
यि हुन् भटमास खानुका फाईदाहरु
काठमाडौँ । प्रत्येक दिनको काम र तनावपूर्ण जीवनका कारण हरेक व्यक्ति केही न केहि समस्याले
काठमाडौँ । प्रत्येक दिनको काम र तनावपूर्ण जीवनका कारण हरेक व्यक्ति केही न केहि समस्याले चिन्तित हुने गर्छ। भटमास यस्ता ६ समस्याको अचुक अपाय हो जसले जराबाटै समाप्त गर्दिन्छ। अनि जाडोको समयमा यसलाई भुटेर पनि खान सकिन्छ । त्यसै गरी तरकारीको ्रपमा पनि यसको सेबन गर्न सकिन्छ ।
भटमासको नियमित रुपमा प्रयोग गर्नाले चाउ।ीपनबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ ।्धेरैजसो मानिसहरुको अनुहार कम उमेरमै चाउरी पर्ने गर्छ। भटमासको नियमित रुपमा प्रयोग गर्नाले यस्तो समस्या थोरै समयमानै हराउने छ।
टुक्रिने र कपाल रफ हुने कारणले गर्दा महीला मात्र नभएर पुरुषहरु पनि चिन्तित हुने गर्छन्। यहि हाम्रो कलि युगको रहन सहनका कारण कपालमा समस्या आएको हो। यदि तपाई आफ्नो लामो,बाक्लो र चम्किलो कपाल बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै देखि नियमित रुपमा भटमासको प्रयोग गर्नुहोस्।
भटमासमा अधिक मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ जसले कपाललाई बाक्लो र चम्किलो बनाउन मदत गर्छ।थोरै समय घुमफिर गर्ने बित्तिकै रिगाटा लाग्ने वा कमजोरी महसुस हुने गर्छ भने यस्तो कमजोरीबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ ।
कस्ता व्यक्तिले अनार सेवन गर्नु हुदैन ?
हरेक फलफुल खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक नै हुन्छ। तर केहि फलफुल यस्ता रोगीहरुले नखानु राम्रो
नङ फुल्दा के हुन्छ ?
काठमाडौं । केटाकेटी युवायुवती वा बुढाबुढी सबैको औलाको नङ फुलेको पाइन्छ । बालबालिकाहरु नङ फूले
काठमाडौं । केटाकेटी युवायुवती वा बुढाबुढी सबैको औलाको नङ फुलेको पाइन्छ । बालबालिकाहरु नङ फूले नयाँ लुगा लगाउन पाइन्छ भन्दै रमाउँछन्। के साँच्चै नङ फुल्नु सौभाग्यको सूचक हो रु केही प्रचलित मिथकः हालतका सबै नङ एकैपटक फूले त्यसले व्यक्ति ठुलो मानसिक संघर्ष झेल्दैछ र उक्त व्यक्ति भविष्यमा बिरामी पर्छ भन्ने संकेत हो ।
दायाँ वा बायाँ हातको बुढी औलाको नङ फुले त्यसले निकट भविष्यमै प्रेम मिलनको संके गर्छ भने नङमा काला टिकाहरु देखिएविपरीत फल भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । साहिँली औंलाको नङ फूले मानसम्मान धन तथा यश प्राप्तिको योग बन्छ । त्यसको विपरीत काला छिटाहरु देखिए अपमान, अपजस तथा बदनामीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
कान्छी औलाको नङमा देखिने सेता दाग व्यापारमा लाभ तथा लक्ष्य प्राप्तिमा अनुकुलताको सूचक मानिन्छ । काला दागले भने त्यसको विपरीत फलको संकेत गर्दछ । चोरी औंलाको नङ फुले प्रेम विजय, मानसम्मान तथा धन प्राप्तिको संकेत मिल्छ । यसको विपरीत काला छिटाहरु देखिए धन तथा मानहानी हुनसक्छ ।
माझी औलाको नङ फुले यात्राको योग परेको मानिन्छ । त्यसविपरीत काला छिटाहरु देखिए यात्रामा नोक्सानी तथा दुर्घटनासमे भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । नङ पँहेलो देखिए व्यक्तिको स्वास्थ्यको दृष्टिले प्रतिकुल अवस्थामा रहेको मानिन्छ । यसैगरी रातो तथा नीलो रंग देखिनु पनि अशुभ मानिन्छ । फुलेको नङको प्रभाव बढीमा पाँच महिना रहने विश्वास छ ।एजेन्सी
साग खानुका फाईदाहरु
काठमाडौं । रायोको सागमा पाइन्ने भिटामिन ए, सी र के युक्त तत्वले हाम्रो शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको
काठमाडौं । रायोको सागमा पाइन्ने भिटामिन ए, सी र के युक्त तत्वले हाम्रो शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छन् । रायोको सागमा पाइने फोलिक र म्याग्नेसियमले शरीरमा रहने विभिन्न विकारयुक्त वस्तुलाई बाहिर निकाल्छ ।रायोको दाना पिसेर तरकारीमा हालेर खाँदा पाचन प्रक्रिया बलियो बन्छ । यसले भोक नलाग्ने
धेरै रोगको औषधी, पनिर खानुका फाईदाहरु
काठमाडौँ । पनिर स्वादका लागि मात्र नभइ स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ ।
काठमाडौँ । पनिर स्वादका लागि मात्र नभइ स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यसको सेवन प्राय मानिसहरुले गरेका हुन्छन् । यसमा पनिरमा प्रोटिनको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसका साथै यसबाट क्याल्सियम र भिटामिन डी पनि पाइन्छ, जसले ब्रेस्ट क्यान्सरबाट बचाउँछ ।
यसमा भएको भिटामिन ए, क्याल्सियम र जिंकले शरीरको हाड र दाँतलाई बलियो बनाउँछ ।एक सय ग्राम पनिरमा ११ ग्राम प्रोटिन हुन्छ । त्यसैले शाकाहारीका लागि यो निकै उपयोगी खाद्यपदार्थ हो ।
गर्भवती महिलाका लागि पनि यो निकै उपयोगी हुन्छ । किनकि, गर्भवती महिलाका लागि क्याल्सियम बढी जरुरी हुन्छ ।पनिरले तौल घटाउनका लागि पनि मद्दत गर्छ ।
पनिरमा म्याग्नेसियम हुन्छ, जसले रगतमा चिनीको मात्रालाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ ।यसले पाचन प्रक्रियालाई स्वस्थ राख्छ र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पनि बढाउँछ ।
अदुवा किन नखाने ? यस्ता छन् कारणहरु
काठमाडौ । अदुवा स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मान्निछ ।
काठमाडौ । अदुवा स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मान्निछ । यो एउटा कन्दमुल हो । यसको सेवन प्राय मानिसहरुको भान्सामा हुने गर्दछ । यसको सेवन गर्दा विभिन्न रोगबाट मुक्त हुने गर्दछ । अदुवा नेपालमा सर्वसुलभ पाइने बिरुवा हो । खासगरी, यसको जरालाई मसला र औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।
क्यान्सरको औषधी गाँजर
काठमाडौँ । गाजर स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मान्निछ यो
काठमाडौँ । गाजर स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मान्निछ यो एउटा कन्दमुल हो ।गाजरले हाम्रो स्वास्थमा राम्रो फाइदा पुर्याउछ ।गाजरमा पाइने विटा क्यारोटिनले स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना ४० देखी ६० प्रतिशत कम हुन्छ ।यसलाई हामीले खानामा सलादको रुपमा प्रयोग गर्छौ ।यसो त गाजरले आँखा तेजिलो बनाउन तथा रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्छ ।
१ हजार ५ सय स्तन क्यान्सर पिडीत महिला र त्यत्तिनै संख्यामा स्वस्थ महिला समावेस गरिएको एक अध्ययनमा गाजरको प्रयोग गर्दा तिनीहरुमा स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना ४० देखि ६० प्रतिशत कम देखिएको थियो ।
एस्ट्रोजेन रिसेप्टर पोजेटिभ स्तन क्यान्सरलाई भने गाजरमा पाइने विटा क्यारोटिनले नघटाउने पाइएको छ ।यसो त गाजरको प्रयोग सलादका रुपमा मात्र नभइ यसको बिभिन्न परिकार समेत बनाउन सकिन्छ ।
बदामका आश्चर्यजनक फाईदाहरु
काठमाडौं । बदाम स्वादका लागि नभई स्वास्थ्यका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक छ । यो
काठमाडौं । बदाम स्वादका लागि नभई स्वास्थ्यका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक छ । यो जाडो मौसको सममा घाममा बसेर धेरै मानिसहरुले खाने गर्दछन ।
यसले हाम्रो शरीरलाई औषधीको रुपमा पनि काम गर्छ । बदामले मोटो मानिसको तौत घटछ यसले क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ शरीरको उचित मात्रामा ब्लड सुगर लेबल मेन्टेन गर्न र डायबिटिजको समस्याबाट बचाउने काम यसले गर्दछ ।
शिशुलाई स्वस्थ बनाउँछ स्ट्रोकको खतराबाट जोगाउछ यसमा खनिज तत्व हुन्छ जसका कारण हर्ट स्ट्रोक वा मुटुसम्बन्धी जुनसुकै रोगबाट जोगाउँछ छालामा चमक ल्याउँछ त्यसैले यसको नियमित प्रयोग गर्दा अनुहार लगायत शरिरका अन्य भागमा दाग आउँदैन ।
खाना खाएपछि किन निन्द्रा लाग्छ ?
काठमाडौं । अधिकाशं मानिसहरुलाई खाना खाएपछाडि निद्रा लाग्ने गदर्छ । अझ बढी त गर्मि मैहिनामा
काठमाडौं । अधिकाशं मानिसहरुलाई खाना खाएपछाडि निद्रा लाग्ने गदर्छ । अझ बढी त गर्मि मैहिनामा यो समसस्या धेरै व्यक्तिलाई हुने हुन्छ । कतिपयले त खानापछि आराम गर्ने वा केही बेर सुत्ने तालिका नै बनाएका हुन्छन् ।किनकि, यसो गर्दा पाचन प्रक्रियामा समस्या सिर्जना हुने हुन्छ । खाना खाएपछि निदाउनु स्वासस्थका लागि पनि त्यति उपयोगि मानिदैन । यसका विभिन्न कारण हरु हुन्छन् । धेरै मानिसहरुलाई खाना खाय लगत्तै निद्रा नलाग्न पनि सक्छ । ९अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट पाइने खानाको सेवनपछि शरीरमा इन्सुलिन बन्न थाल्छ ।
हरियो प्याजले निको गर्छ यस्ता रोगहरु
काठमाडौ । हरियो प्याज स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिनछ
काठमाडौ । हरियो प्याज स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिनछ । यो एउटा कन्दमुल हो । यसको सेवन गर्दा विभिन्न किसिमका रोबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
धेरै जसो मानिहिरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यसको सेवन गर्दा कति फाइदा हुन्छ भनेर रियो प्याजले मोटो शरीरको तौल पातलो बनाउँछ।यसमा भिटामिन सी को मात्रा धेरै हुने भएकाले कमजोरी हटाउँछ र भरपूर शक्ति प्रदान गर्दछ।हरियो प्याजमा फाइबरको मात्रा धेरै हुने भएकाले पाचनप्रणालीमा सुधार ल्याउँछ।
यसले ब्ल्ड सुगर लेभललाई कन्ट्रोल गर्ने भएकाले डायबेटीजको बिरामीलाई निक्कै फाइदा पुर्‍याउँछ। यसमा एन्टी इन्फ्लेमेटरीको गुण भएकाले यसले अर्थराइटिस हुनबाट जोगाउँछ।
हरियो प्याजमा भिटामिन ए समेत रहेको हुँदा यसले आँखाको ज्योति बढाउनुका साथै रतन्धो हुनबाट पनि जोगाउँछ। । यसमा एन्टी ब्याक्टेरियल गुण भएकाले यसले रुघाखोकी तथा टाउँको दुखेकोलाई सन्चो बनाउँछ।
काठमाडौं । मानिसको सही आहार बिहार नभएर धेरैजसो रोगी भएका छन् । खान नपाएर भन्दा
काठमाडौं । मानिसको सही आहार बिहार नभएर धेरैजसो रोगी भएका छन् । खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर रोगी छ हिजो आज।
दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने नुनका यस्ता छन् फाईदाहरु
काठमाडौ । नुन स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ ।
काठमाडौ । नुन स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो एउटा अत्यावश्यक पदार्थ हो । यसले खानालाई स्वादिष्ट बनाउने काम गर्छ । हामिले नुन विनाको तरकारी स सोच्न पनि सकिदैन् । प्याज र लसुन खाएपछि हात गनाउने समस्या हुन्छ ।
तर, सजिलै यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि हातमा नुन रगडेर पानीले सफा गर्नुपर्छ ।वेलावेलामा जुत्ता गनाएको कारणले आमिलाई असजिलो महसुस हुने गर्दछ यदि छोटो समयमै जुत्ता गनाउने समस्या भए मोजामा सानो पोका नुन राख्नाले यसबाट बच्न सकिन्छ ।
काटेको फललाई ताजा बनाउनका लागि पनि नुन उपयोगी हुने गर्दछ । नुनलाई तामाको भाँडा चम्काउन वा भाँडामा लागेको खिया फाल्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तपाईलाई थाहा छ प्याजको चिया हुन्छ भनेर ?
काठमाडौं । तुलसी, अदुवा, इलायचीको चिया सबैले पिउनु भएकै होला तर प्याजको चियाको बारेमा सायदै
काठमाडौं । तुलसी, अदुवा, इलायचीको चिया सबैले पिउनु भएकै होला तर प्याजको चियाको बारेमा सायदै थाहा होला । सुन्दा पनि अलि अचम्म लाग्छ, तर प्याजको यो चिया स्वास्थ्यको लागि निकै महत्वपूर्ण लाभ प्रदान गर्छ । प्याजको चिया बनाउने विधिस् प्याजको चिया बनाउनको लागि पानीलाई उमालेर यसमा काटेको प्याज हाल्नुहोस् र राम्रोसँग मिलाएर छान्नुहोस् । अब यसमा कागती वा स्वादको लागि ग्रीन टी ब्यागमा हाल्न सक्नुहुन्छ । यदि गुलियोको चाहनुहुन्छ भने थोरै महको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । प्याजको चियाको सेवनले मिल्ने स्वास्थ्य लाभ यस्ता छन् ।
प्याजको चियाको सेवन हाइपरटेन्शनबाट बचाउन सहायक हुन्छ । यसको साथै रगतको थेक्लो जम्न नदिन पनि यो फाइदाजनक सावित हुन्छ । २९एक सोधको अनुसार, प्याजको चिया टाइप । डायबिटीजबाट आराम दिलाउन लाभकारी हुन्छ । यसको साथै प्याजको चिया फ्री रेडिकल्सलाई समाप्त गर्न पनि मद्दतगार हुन्छ । प्याजको चियाको सेवनले क्यान्सरको कोशिकाहरूको विकासलाई रोक्न मद्दत गर्छ । विशेषगरी यो कोलोन क्यान्सरका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । डायबिटीज रोगीका लागि यो निकै फाइदाजनक हुन्छ । साथै मोटोपन कम गर्नको लागि पनि यसको उपयोग निकै प्रभावकारी हुन्छ । अनिन्द्राको समस्या हुँदा पनि प्याजको चियाको सेवन निकै प्रभावकारी हुन्छ । यसबाट राम्रो निन्द्रा लाग्न शुरू हुन्छ ।
मासुमा भन्दा बढी प्रोटिन हुन्छ बहुगुणी झुसे करेलामा
काठमाडौँ । झुसे करेला स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै उपायोगी हुन्छ ।
काठमाडौँ । झुसे करेला स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै उपायोगी हुन्छ । यसको तरकारीको सेवनले हाम्रो शरीरलाई अत्यन्तै फाइदा पुग्छ । चट्टेललाई धेरै शक्तिबर्द्धक तरकारी मानिन्छ यसमा मासुको तुलनामा धेरै प्रोटिन हुन्छ अर्थात यो प्रोटिनको भण्डार हो ।
चट्टेलमा पाइन फाइटोकेमिकल्स शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुको साथै यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्डले रगत सफा राखेर छालासम्बन्धी रोग हुन दिँदैन ।घाखोकीबाट राहत प्रदान गर्नुको साथै रोक्नसमेत सहयोग गर्छ ।
यति मात्र होइन क्यान्सर जस्तो प्राण घातरोगलाई रोक्नसमेत सहयोग गर्छ । यसको सेवनले क्यान्सरको रोगीलाई समेत फाइदा पुग्छ ।खासम्बन्धी विभिन्न रोग,मुटु रोगको पनि रोकथाम गर्न सहयोग गर्छ । फाइबर को बढी मात्रा बढी भएकाले शरीरका लागि धेरै फाइदाजनक छ तौल र उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रित गर्नेर् गुण पनि यसमा हुन्छ । यसमा प्रचुर मात्रामा आइरनसमेत पाइन्छ ।
पाइल्स भएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? खानुहोस करेला यस्ता छन फाईदाहरु
काठमाडौं । तीते करेला स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिनछ
काठमाडौं । तीते करेला स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिनछ । यसको सेवन प्राय मानिसहरुको घर घरमा हुने गर्दछ । यो एउटा लहरे तरकारी पनि हो यो धेरै जसो गाँउ घरमा पाइने गर्दछ ।
यसको सेवन गर्दा हाम्रो शररिलाई धेरै किसिमका फाइदा हुन्छन् । शरीरमा कफ जम्मा भएमा करेला खानुपर्छ । करेलामा पाइने फस्फोरसले शरीरको कफ निकास गर्न सघाउ पुर्या‍उँछ ।दमको समस्या भएकाहरूले मसला नहालीकन पकाएको करेलाको तरकारी खानु राम्रो हुन्छ ।
कलेजोसम्बन्धी समस्या भएकाहरूका लागि पनि करेलाको तरकारी ज्यादै उपयोगी हुन्छ ।करेला खाने गर्नाले रगत सफा हुन्छ । रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउनका लागि पनि करेला खाने गर्नुपर्छ ।करेला शितल खाद्य भएकाले गर्मी याममा करेला खाने गर्नु लाभदायक हुन्छ ।बान्ता, हैजा आदि भएमा करेलाको रसमा थोरै पानी र कालो नुन छरेर खाने गरेमा तुरुन्त लाभ मिल्छ ।
तनाव कम गर्नको लागी खानै पर्ने यी कुराहरु
काठमाडौं । आजकाल मानिसहरु निकै व्यस्त रहने भएकाले तनाव व्यहोरिरहेका हुन्छन् । तर, मानिसहरु आफूलाई
काठमाडौं । आजकाल मानिसहरु निकै व्यस्त रहने भएकाले तनाव व्यहोरिरहेका हुन्छन् । तर, मानिसहरु आफूलाई खुसी र तनावमुक्त बनाउन ध्यान दिँदैन । यदी खानपानमा ध्यान दिने हो भने मानिस केहीहदसम्म तनावमुक्त हुन सक्छन् ।
सधै खुसी राख्न हार्मोने सेरेटोनिनको आवश्यक पर्छ । यसको आवश्यकता पूर्तीका लागि खानपानमा ध्यान दिए पुग्छ । खुसी हुनको लागि हामीले पोटाशियम, म्याग्नेशियम, र फलिक एसिडको मात्रा धेरै भएका खानेकुराहरु खाने गर्नुपर्छ ।
अण्डा खाने गरेमा केही हदसम्म आफूलाई तनावमुक्त बनाउन सकिन्छ । भिटामिन सी र भिटामिन ए धेरै हुने भएकाले रातो डल्ले खुर्सानीले मानिसलाई तनावमुक्त बनाउन सक्छ । नरिवलमा हुने ईलेक्ट्रोलाईट्सले शरीर र दिमागलाई हाइड्रेड राख्छ र शरीरमा खुसीको सञ्चार गराउँछ ।
सिमीमा पाइने म्याग्नेशियमले शरीरमा भरपूर खुशी बढाउने हार्मोनलाई सक्रिय बनाउँछ । यसमा हुने कार्बोहाइड्रेट्सले मानिसलाई खुसी बनाउने हार्मोनलाई सन्तुलनमा राख्छ ।
पानीमा नून हालेर नुहाउनुका फाइदाहरु यस्ता छन्
काठमाडौं । हामीले खाने कुरा कुनै कुनै रोगको औषधि हुन्छ । नून बिनाको तरकारी खान
काठमाडौं । हामीले खाने कुरा कुनै कुनै रोगको औषधि हुन्छ । नून बिनाको तरकारी खान सकिँदैन । तर, यो नूनको प्रयोगले कयौं रोग भगाउन सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसको प्रयोगबाट संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ ।
ज्वरो आउँदा सीधे नून मनतातो पानीमा हालेर नुहाउनुस् । एक बाल्टिन मनतातो पानीमा दुई चम्चा नून, एक चम्चा नरिवल तेल मिसाएर नुहाउँदा रुघा र ज्वरो ठीक हुन सहायता पुग्छ । मांसपेशीको पीडा पनि नून हालेको पानीले नुहाउँदा ठीक हुन्छ । नूनिलो पानीले नुहाउँदा शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुन पाउँदैन र हाड तथा नङ बलिया हुन्छन् ।
नून हालेको पानीले नुहाउँदा छाला चिलाउने समस्या हट्छ । अनि राम्रो निद्रा पनि लाग्छ । अनिद्राको समस्या भएकाहरूले नून हालेको पानीले नुहाउने सल्लाह दिइन्छ । नूनपानीको स्नानले शारीरिकका साथै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउँछ । यस्तो पानीले स्नान गर्दा तपाईं शान्त, खुशी र आराम अनुभव गर्नुहुन्छ । यो राम्रो स्ट्रेस बस्टर हो ।
नूनमा भएका मिनरल र पोषक तत्त्वले छालालाई जवान बनाउँछ ।
कपालदेखि मुटुसम्मका रोगको लागि उपयोगि औषधि फिटकिरीका यस्ता छन् फाईदाहरु
एजेन्सी । फिटकिरीले केवल पानी मात्र सफा गर्दैन। यसले स्वास्थ्यमा पनि कयौं तरिकाले फाइदा गर्छ।
एजेन्सी । फिटकिरीले केवल पानी मात्र सफा गर्दैन। यसले स्वास्थ्यमा पनि कयौं तरिकाले फाइदा गर्छ। यसको प्रयोगले विभिन्न रोगबाट बच्न सकिन्छ। फिटकिरीमा म्याग्नेसियम सल्फेट हुन्छ। म्याग्नेसियम मानिसको कोषको महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जसले शरिरमा ३०० भन्दा बढी इन्जाइमलाई रेग्युलेट गरेर हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ।
मनतातो पानीमा फिटकिरी र कन्डिसनर समान मात्रामा मिलाएर कपालमा लगाउनुस्। १५र२० मिनेट पश्चात चिसो पानीले धुनुस्। हप्तामा एक पटक यस्तो गर्दा कपाल बाक्लो हुन्छ। दुखेको हात वा खुट्टा दुई चम्मा फिटकिरी घोलेको पानीमा डुबाउनुस् दुखाइ कम हुन्छ। म्याग्नेसियमले शरिरबाट हानिकारक पदार्थ निकाल्छ। तातो पानीमा एक कप फिटकिरी पाउडर हालेर १०९१५ मिनेट पछि त्यो पानीले नुहाउँनुस्।
हप्तामा २र३ पटक यस्तो गर्दा छाला स्वच्छ बन्छ। जाडो महिनामा ओठ लगायतको छाला फुट्ने समस्या अधिकांसले भोग्दै आएको हो। फिटकिरी, अलैचीको दाना एक साथ पिनेर छालामा लगाउँदा फुटेको सन्चो हुन्छ। फिटकिरी पानी हप्तामा तीन पटक पिउँनुस्। शारिरीक अनि मानसिक तनाव कम गर्न यो निकै फलदायी हुन्छ। फिटकिरी पानीले नुहाउँदा मुटुलाई पनि राम्रो गर्छ। साथै हृदयघातको सम्भावना समेत कम गर्छ।
चिसो मौसममा औला सुन्निने समस्या पनि फिटकिरीले समाधान गर्छ। मनतातो फिटकिरी पानीमा सुन्निएको औला डुबाउँदा राहत मिल्छ। टन्सिनको समस्या छ भने फिटकिरी पानीले गारगर गर्दा छिटो सन्चो हुन्छ। काटेको ठाउँबाट रगत बगेको छ भने फिटकिरी पानीले धुनुस् अनि फिटकिरको पाउडर लगाउनुस्। रगत बन्द हुन्छ। साथै बगेको रगत बन्द गर्न चिनी पनि निकै सहज घरेलु उपाय हो।
फलहरुको राजा भनिएको आँपका यस्ता छन फाईदाहरु
काठमाडौ । आँप खादा मात्र मिठो नभई स्वस्थ्यका लागि पनि उत्तिकै लाभदाक हुन्छ । यसले
काठमाडौ । आँप खादा मात्र मिठो नभई स्वस्थ्यका लागि पनि उत्तिकै लाभदाक हुन्छ । यसले शरीरमा तागत दिन्छ, प्यास मेटाउँछ भोक पनि मेटाउँछ । आँपको पातलाई उमालेर रातभरी ढाडिन दिने अनि छानेको झोल बिहानी पख सेवन गर्दा मद्युमेह नियमन गर्न सघाउ पु¥याउँछ ।आँप भिटामिन–ई को उत्तम श्रोत मानिन्छ । जसको सेवनले यौनिक क्षमतामा अभिवृद्धि गराउँछ ।
राम्रो स्वास्थ्यको लागि पाचन प्रणाली दुरुस्त मानिन्छ । आँपले खाने कुरा पच्ने पचाउने उत्पन्न हुने बिकार दिसाको रुपमा विसर्जन गर्ने क्षमता विकास गराउँछ ।आँपमा पाइने क्युरसेटिन, आइसो क्युरसेटिन, अस्ट्रागालीन, फिसेटिन, स्गालीक एसीड, मिथाइल गाल्लेट, साथै प्रचुर मात्रामा पाइने इन्जाइमस तथा एण्टीअक्सीडेन्ट हरुले ‘कोलन’, ठूलो आन्द्रा, बक्षस्थल तथा रक्त क्यान्सर हुनबाट बचाउन सहयोगी हुने गर्दछन् ।
आँपमा भिटामिन–सी, पेकटीन पाइने हुँदा यीनले रक्त झोल ९सिरम० मा कोलेस्ट्रोलको मात्रा खास गरी कम घनत्वको लिपोप्रोटिन जुन साँच्चीकै शरीरको लागि घातकलाई न्यूनीकरण गरिदिन्छ ।र छालाको रुप रंग बारे केटिहरु मात्र हैन केटाहरु पनि खास गरी गर्मी बर्षाको बेला सजग हुने गर्दछन् । यो बेला आँप उपलब्ध छ, छालाको छिद्र सफा गर्नुका साथै डण्डीफोर, कालो दाग हटाउन ।
शरीरबाट छालाका डल्ला हटाउने घरेलु उपाय जान्नुहोस्
एजेन्सी । मान्छेको शरीरमा आउने स९साना डल्ला हटाउने उपायबारे सायदै सुन्नुभएको होला । शरीरमा जति
एजेन्सी । मान्छेको शरीरमा आउने स९साना डल्ला हटाउने उपायबारे सायदै सुन्नुभएको होला । शरीरमा जति डल्ला भएपनि अब भने यिनलाई हटाउने घरेलु उपायहरु पत्ता लागेको छ । हुन त यी डल्लाले शरीरलाई खासै हानी गर्दैनन् तर, सौन्दर्य विगारेको हुनाले अब घरमा बसेर सजिलैसँग डल्ला हटाउन सकिन्छ ।
चुक अमिलोले यी डल्ला हटाउन मद्दत गर्छन् । एप्पल साइडर भिनेगर ९स्याउबाट बनेको चुक अमिलो० ले सजिलै डल्ला हटाइदिन्छ ।
यसका लागि तपाईंले कपास चुक अमिलोमा डुबाउनुस् । त्यसपछि यसलाई छालाका डल्लामा दिनको दुई तीन पटक घोट्नुस् । यो प्रक्रिया दिनदिनै दोहोर्याउनुभयो भने डल्लाको रंग परिवर्तन हुन्छ र आफैं झरेर जान्छ । यसो हुन लगभग एक हप्ता लाग्छ ९अलिक बढी पनि लाग्न सक्छ० । त्यसैले धैर्य गर्नु जरूरी हुन्छ ।
चटनी खानुका फाईदाहरु
काठमाडौं । नेपालीले बिहान, बेलुकीको खानासँगै चटनीको प्रयोग गर्छन् । अधिकांशले चटनीलाई स्वादको लागि मात्र
काठमाडौं । नेपालीले बिहान, बेलुकीको खानासँगै चटनीको प्रयोग गर्छन् । अधिकांशले चटनीलाई स्वादको लागि मात्र प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, चटनीले खानालाई स्वादिष्ट बनाउने मात्र काम गर्दैन । यसमा कैयौँ औषधीय गुण पनि हुन्छन् । स्वामी प्रकाशले चटनीको औषधीय गुणबारे बताएका छन् टमटरमा भिटामिन सी, लाइकोपिन, भिटामिन र पोटासियमको मात्रा अत्यधिक हुन्छ ।
तौल कम गर्न चाहनेका लागिसमेत टमटरको चटनी अचुक बन्न सक्छ ।धनियाँको चटनीको प्रयोगले मधुमेहजस्ता रोगलाई समेत दूर गर्ने काम गर्छ । जसले कब्जियतजस्ता समस्याबाट छुटकरा दिलाउँछ । चटनी धेरै मानिसहरुले प्रयोग गर्दछन् । यसको सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई धेरै किशिमका फाइदाहरु हुन्छन् । टमटरको चटनीले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई काम गर्ने काम पनि गर्छ ।
ज्वानो किन खाने ?
काठमाडौ । नेपालीको भान्सामा सजिलै पाईने कुरा हो ज्वानो । यो खाना बनाउदा मात्र हैन
काठमाडौ । नेपालीको भान्सामा सजिलै पाईने कुरा हो ज्वानो । यो खाना बनाउदा मात्र हैन औषधीका लागि पनि हामीले यसको प्रयोग गर्न सक्छौ । मौसम परिवर्तनको बेला हुने संक्रमणले मानिसहरू अनेक खालका मौसमी रोगबाट पीडित छन् ।
अमलाको जुस खानुका फाईदाहरु
काठमाडौं । अमला स्वास्थ्यको हिसाबले निकै गुणकारी फल हो । मानिसले यसको प्रयोग गर्मी महिनामा
काठमाडौं । अमला स्वास्थ्यको हिसाबले निकै गुणकारी फल हो । मानिसले यसको प्रयोग गर्मी महिनामा वढि गर्ने गर्दछन् । अमलामा भिटामिन सी ,फाइबर र प्रोटिन प्रसस्तै मात्रामा पाईन्छ । मानिसहरुले अमलाको जुसको प्रयोग पनि धेरै गर्ने गर्दछन् । अमलाको जुसमा धेरै भिटामिन पाईन्छ । यसको सेवनले शरीरको छालालाई मजबुत बनाउँने काम गर्दछ । अमलाको जुसको सेवनले शरीरलाई कस्तो कस्तो फाईदा गर्छ भन्ने कुरा आज बताउँन गईरहेका छौ ।
अमलाको जुुसको प्रयोग नियमित रुपमा गरेमा पाचँन प्रणलीलाई मजबुत बनाउँछ । अमलाको जुसमा प्रसस्तै मात्रामा भिटामिन पाईने भएको कारणले गर्दा यसको सेवनले शरीरलाई फूतिलो बनाउँछ । यसको सेवनले अनुहारमा आउँने डण्डीफोरबाट सधैको लागी मुक्ति पाउँन सकिन्छ ।
अमलाको जुसमा केरा तथा मह मिसाएर सेवन गरेको खण्डमा महिलाहरुको महिनावारी समस्याबाट छुटकारा पाउँन सकिन्छ । साथै यसको प्रयोग नियमित गरेको खण्डमा रगत शुद्ध हुन्छ ।
ओखर खानुका फाईदाहरु
काठमाडौं । ओखरमा औषधीय गुण रहेको हुन्छ । जसको सेवनले डिप्रेसन हुन नदिने चिकित्सकहरु बताउँछन्
ओखर खाने व्यक्तिमा डिप्रेसनकोस्तर २६ प्रतिशतले घट्ने निष्कर्ष निकालेको अध्ययनले ओखरले शारीरिक ऊर्जामा वृद्धि र एकाग्रता बढाउने बताएको छ ।
न्युट्रियएन्ट जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनको निष्कर्षमा अध्ययनमा संलग्नमध्ये एक वयस्क जीवनमा एक न एकचोटि डिप्रेसनग्रस्त भएको बताएका उल्लेख छ । अध्ययनमा २६ हजारभन्दा बढी अमेरिकी वयस्कहरूलाई संलग्न गरिएको थियो ।
काजु खानुका फाईहरु
काठमाडौं । हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने काजु निक्कै उपयोगी छ । के तपाईंलाई थाहा छ
काठमाडौं । हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने काजु निक्कै उपयोगी छ । के तपाईंलाई थाहा छ त काजूू फाइदाहरु रु नमकीन, हजुुवा, मिठाई तथा विभिन्न परिकारको स्वाद बढाउने ड्राइफुुडको प्रयोग सबैको घर, होटल तथा मिठाई पसलहरुमा हुने गर्दछ । प्रयाः त्यसमा काजुको प्रयोग गरिन्छ ।
काजूको दाना हुन्छ, यो क्याशू एप्पलबाट निस्कन्छ र यसको रङ काँचोमा हरियो हुन्छ ।
काजू खेती सर्वप्रथम पूर्वी ब्राजिलमा गरिएको थियो । सर्वप्रथम १५५० को दशकमा पोर्चुगलले यसको निर्यात शुरु गरेको थियो ।
काजू को उत्पादन विश्वभरि २०१५ मा ७३८८६१ टन थियो ।
काजूूको रुख ठूलो र सदाबहार हुन्छ, यसको लम्बाई १४ मिटरसम्म लामो हुन्छ ।
काजूको रुखबाट निस्कने र्यालको प्रयोग विभिन्न औद्योगिक उत्पादनहरुमा प्रयोग गरिन्छ ।
दालचिनी खानुका फाईदाहरु
काठमाडौ । दालचिनी स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ ।
काठमाडौ । दालचिनी स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो प्राय मानिसहरुले सेवन गरेका हुन्छन् ।
कालो तिलका यस्ता छन् आश्चर्यजनक फाईदाहरु
काठमाडौं । कालो तिल अथवा तिलबाट प्राप्त हुने बिऊ तेल उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अनुहारमा
काठमाडौं । कालो तिल अथवा तिलबाट प्राप्त हुने बिऊ तेल उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अनुहारमा चायाँ, पोतो वा दाग, कालो घब्वा आदि आएमा त्यसलाई सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। साथै कम्मर दुख्ने रोगलाई पनि निको पर्न सकिन्छ त्यसको लागि तल दिएको उपायहरुलाई नियमित प्रयोग गर्नु पर्छ।
काँचो प्याज खानुका फाईदाहरु
काठमाडौं । प्याज काट्नु निकै नै कठिन काम हो, किनभने प्याज काट्दा आँखाबाट आँशु आउने
काठमाडौं । प्याज काट्नु निकै नै कठिन काम हो, किनभने प्याज काट्दा आँखाबाट आँशु आउने हुँदा हतपती कसैले पनि प्याज काट्न चाहँदैन । तर, प्याजले हाम्रो स्वास्थ्य र सौन्दर्यलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ ।
प्याजमा एन्टी–इन्फ्लेमेट्री गुण पाइन्छ ।काँचो प्याजलाई कपालमा लगाउनाले कपाल लामो हुने र चाँयाको समस्यामा राहत हुन्छ । प्याजमा धेरै प्रकारका तत्वहरु पाइन्छ, जुन क्सान्सरबाट जोगाउनमा सहयोगी हुन्छ ।
प्याजमा पाइने भिटामिन सी र क्याल्शियम मुखको स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायक हुन्छ ।काँजो प्याजको रस कपालको जरादेखि नै लगाउनुपर्छ ।काँजो प्याजको सेवनले ब्लड शुगर नियन्त्रण गर्नमा मद्दत गर्छ । काँचो प्याज खानाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि हुन्छ ।
यसकारण हुन्छ युरिक एसिड
काठमाडौँ । धेरै मानिसहरु युरिक एसिडले दुख दिएर चिन्तामा हुन्छन । मानिसले खानपान जीबनशैलमा ध्यान
काठमाडौँ । धेरै मानिसहरु युरिक एसिडले दुख दिएर चिन्तामा हुन्छन । मानिसले खानपान जीबनशैलमा ध्यान नदिाद युरिक एसिड लहुन्छ । शरीरमा प्रोटिनको मात्रा बढी भएमा युरिक एसिड बढ्छ । तसर्थ, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि पर्याप्त पानी वा झोलयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ ।
जसले बढीभन्दा बढी युरिक एसिड पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्छ । युरिक एसिड हुनेमानिसहरु रातो मासु, सी फुड, दाल, राजमा, च्याउ, बन्दाकोभी, मटर, पनिर र भिन्डीलगायत पदार्थको मात्रा बढी हुँदासमेत युरिक एसिड बढ्ने हुनाले यसता खानेकुरा मिलाएर खाने गर्नुपर्छ ।शरीरमा प्रोटिनको मेटाबोलिज्म भएर निस्कने तत्वलाई युरिक एसिड भनिन्छ । यो शरीरमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो ।
हाम्रो जीबनशैली नमिलेर नै युरिक एसिड बढ्ने गर्छ । जसले गर्दा जोर्नीको दुखाइ, मधुमेह र पिसाबमा समस्या आउने गर्छ । शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा पत्ता लगाउन रगतको जाँच गर्नुपर्छ । रगतमा युरिक एसिडको मात्रा तीनदेखि सात मिलिग्राम प्रतिलिटर भए त्यसलाई सामान्य मानिन्छ । तर, रगतमा एसिडको मात्रा सात मिलिग्रामभन्दा बढी भएमा हाइपरयुरिसेमिया भएको मानिन्छ । युरिक एसिड हुँदा बिहान उठ्दा बुढी औँला दुख्ने, सुन्निने तथा हिँड्न अप्ठ्यारो हुने युरिक एसिडका लक्षण हुन् ।
यसबाहेक कुर्कुच्चा, घुँडा, कुहिना र औँलाका जोर्नीमा दुखाइ हुन सक्छ । रातो मासु, सी फुड, दाल, राजमा, च्याउ र पनिरलगायत खाद्यपदार्थको मात्रा बढी हुँदा युरिक एसिड बढ्छ ।उच्च औषधिको सेवन, थाइराइडमा समस्या, आइरनको मात्रा बढेमा र मदिरापानले पनि युरिक एसिड बढ्छ । यसर्थ, यस्ता चिजबाट बच्न आवश्यक हुन्छ ।
युरिक एसिडको लक्षण देखापरेमा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम जोर्नी दुख्नेरसुन्निने कम गर्ने औषधिको सेवन गर्नुपर्छ । र हाम्रो जीबन शैली र खानपानमा सुधार गरेमा युरिक एसिड हुन पाँउदैन ।
जन्डिस हुँदा के खाने के नखाने ? जानिराखौं
काठमाडौं । कमलपित्त अर्थात जन्डिस कलेजोसम्बन्धी रोग हो । खाना पचाउन सहयोग गर्ने कलेजोमा प्रदूषित
काठमाडौं । कमलपित्त अर्थात जन्डिस कलेजोसम्बन्धी रोग हो । खाना पचाउन सहयोग गर्ने कलेजोमा प्रदूषित खानपान, फोहोर पानी र अत्याधिक मद्यपानले असर गर्छ । जसका कारण जन्डिसको संक्रमण वढी हुन्छ । जन्डिस एउटा लक्षण हो, जो शरीरको विभिन्न भागमा पहेँलोपनको रुपमा देखा पर्दछ । जण्डिस आफैँमा रोग होइन, यो कुनै रोगको कारण हो । पहेँलोपनको जण्डिस असामान्य अवस्था हो तर बिरामीले जण्डिसलाई नै रोग भन्ने गरेका छन् ।
जन्डिसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसकिएमा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउँछ । कतिपयको मृत्यु पनि हुने गरेको छ । जन्डिस हुँदा यसको उपचार भनेको खानपानमा ध्यान दिने र आराम नै महत्वपूर्ण कुरा हो । यो रोगलाई आयुर्वेद र एलोपेथी दुवै विधिबाट उपचार गरिन्छ । आयुर्वेदमा कमलपित्त हुँदाखेरि कस्ता कुरा सेवन गर्ने या नगर्ने भन्ने मान्यता रही आएको छ ।
जन्डिसमा खान हुन्छ
१, पेयपदार्थहरू : पानी, ग्लुकोज पानी, मिश्री पानी प्रशस्त मात्रामा खाने उखु मौसम सुन्तला आदिको जुस खाने। २, फलफूलहरू स् उखु, मेवा, स्याउ, सुन्तला, नासपती, कलिला काँक्राहरू, नरिवलको पानी, खरबुजा, तरबुजा, गाँजर, मुला, प्रशस्त खाने ।
2, मसलाहरू : सिधेनुन, जिरा, धनिया, अदुवा, लसुन, प्याज, बेसार, जन्डिस कम हुँदै गएको अवस्थामा मात्र थोरै खान सकिन्छ ।
3, सब्जीहरू रायोको साग, काउली, बन्दा, फर्सीको मुन्टा, सिमी, तितेकरेला, लौका, स्कुस, आलु, च्याउ, फर्सी हरियो र पाकेको चम्सुर, पालुंगो, मेथीको साग, सिधेनुन जिरा हालेर उसिनेको तरकारी खान हुन्छ । जिउ चिलाउन थालेमा भने नुन नखानु राम्रो हुन्छ ।
4, रहरको दाल, मुँगको दाल, पाउरोटी –क्रिम नभएको, बिस्कुट, दूध डेरीको मात्र ६, जन्डिस भएको अवस्थामा जतिसक्यो आराम गर्नुपर्छ । ७, रोग लाग्नेबित्तिकै आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
१, सब्जीहरू तोरीको साग, सुपको साग २, फलफूलहरू स् आँप, केरा, अंगुर, लिची, अनार, अम्बा ३, मसलाहरू स् चिल्लो पदार्थहरू, खुर्सानी, काजु, बदाम, छोकडा, तिल,
2, पेय पदार्थहरू दही, मोही, फ्रिजमा राखेको कोक फेन्टा पेप्सीलगायतका चिसो पेय तथा चिया, कफी तथा अत्कोहलजन्य पेय पदार्थ
चाउचाउ, केक, पप, मिठाईहरू, भटमास, चना, बोडी, अन्डा, माछा मासु, चिल्लो पिरो अमिलो मासको दाल, मसुरो विपरीतलिंगीसँग नसुत्ने अर्थात् एक्लै सुत्ने । जन्डिस हुँदा ज्वरो आएमा सिटामोल खानुहुँदैन । ज्वरो वढी आएमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्दछ ।
अनुहारलाई सुन्दर बनाउने घरेलु उपायहरु
काठमाडौं । अनुहारलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा महिलाहरु सधै अग्रसर हुन्छन् । सुन्दरताको
काठमाडौं । अनुहारलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा महिलाहरु सधै अग्रसर हुन्छन् । सुन्दरताको लागी महिलाहरुले आधुनिक तरिका पनि अपनाउने गर्छन् । तर घरेलु उपाए अपनाएको खण्डमा पनि छालालाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान कमै महिलाहरुलाई हुने गर्दछ ।
छालालाई गोरो र चम्किलो बनाउनको लागी कागती र महको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अनुहार तथा शरीररको कुनै पनि भागमा कागती र महको लेप लगाएको खण्डमा यसले छालालाई कोमल बनाउने काम गर्दछ । यसले शरीरको छालामा रहेको मृत कोषिकालाई निर्मूल पार्ने काम गर्दछ ।
अनुहारको चमक बढाउन चन्दनको लेपको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोग गरेको खण्डमा छालामा रहेको छिद्रहरू कम गर्नुका साथै दाग–धब्बा हटाउन पनि सहयोग गर्छ । यसको प्रयोग नियमित गरेको खण्डमा अनुहारमा हुने चिल्लोपना कम गर्ने, फुस्रो कम गर्ने र अनुहारमा दानाहरू पनि आउन दिँदैन ।
मह सेवन गर्नुका फाईदाहरु
काठमाडौं । तपाई मह कतिको खानुहुन्छ रु महको स्वाद गुलियो हुन्छ । यो सबैलाई मन
काठमाडौं । तपाई मह कतिको खानुहुन्छ रु महको स्वाद गुलियो हुन्छ । यो सबैलाई मन पर्छ । यो जति स्वादिलो हुन्छ त्यतिनै यसले शरीलाई फाईदा गर्ने काम गर्दछ । मह औषधीको रुपमा प्रयोग हुने गर्दछ । दैनिक रुपमा मह सेवन गर्नाले कस्तोे कस्तो सहयोग पूर्याउदछ भन्ने कुरा आज बताउन गईरहेका छौं ।
एक गिलास पानीमा एक चम्चा मह र कागती मिसाएर हरेक दिन पिएको खण्डमा तौललाई सन्तुलमा राख्ने काम गर्दछ । महलालाई दुधमा मिसाएर खाएको खण्डमा पनि यसले शरीरको पाँचन प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम गर्दछ । एक चम्चा मह मात्रै सेवन गरेको खण्डमा यसले पेटलाई सफा बनाउने काम गर्दछ । यसले मुटुलाई समेत स्वस्थ्य राख्नमा मद्धत पूर्याउदछ । चोटपटक लागेको ठाउँमा मह लगाईदिने गर्नाले पनि छिट्टै निको हुन्छ ।
माछा खानुका फाईदाहरु
काठमाडौं । तपाईलाई माछा कतिको मन पर्छ रु माछा खानु स्वास्थ्यको लागी निकै फाईदाजनक रहेको
काठमाडौं । तपाईलाई माछा कतिको मन पर्छ रु माछा खानु स्वास्थ्यको लागी निकै फाईदाजनक रहेको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अनुसरण गर्ने हो भने पनि माछा खानु स्वास्थ्यको लागी निकै फाईदाजनक रहेको छ । माछाको सेवनले मुड फ्रेस हुने तथा शरीररको सबै अंगहरुलाई काम गर्नको लागी सक्रिय बनाउने भएको कारणले गर्दा माछा खानु स्वास्थ्यको लागी फाईदाजनक रहेको छ ।
माछामा प्रसस्तै मात्रामा ओमेगा पाउने भएको कारणले गर्दा यसको सेवनले शरीररमा एक किसिमको उर्जा प्रदान गर्दछ । माछाको सेवनले मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणाली स्वस्थ्य बनाउने कारणले गर्दा माछा खानु स्वास्थ्यको लागी निकै फाईदाजनक रहेको छ । बिशेष गरी माछाको सेवनले बच्चाहरुको बौदिक विकाश गर्नमा सहयोग पूर्याउछ । माछामा ओमेगा प्रचुल मात्रामा पाईने भएको कारणले गर्दा बच्चाहरुको बौदिक क्षमतामा बृद्धि गराउँछ ।
सानोमा माछाको सेवन गरेको बच्चा निरोगी र फूर्तिलो हुन्छ । ठुलो मानिसको लागी पनि माछाको सेवन गर्नु निकै फाईदाजनक रहेको छ ।
मुटु स्वस्थ राख्छ हरियो केराउले
काठमाडौ । हरियो केराउ स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइला जनक मानिन्छ
काठमाडौ । हरियो केराउ स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइला जनक मानिन्छ । यो स्तादमा अतिनै मिठो हुने गर्दछ । केराउ प्रायको भान्सामा पाक्ने नियमित तरकारी पनि हो । सामान्यतया खाजाको रुपमा केराउको छोले र चनाको खुव प्रयोग हुन्छ । यसको तरकारी पकाउन काचो सलाद बनाउन केराउको प्रयोग हुन्छ । हरीयो केराउ खाँदाका धेरै फाइदा छन् त्यो सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । यस्को सेवन गर्दा हाम्रो शरिरलाई विभिन्न किसिमका फाइदाहरु हुने गर्दछन ।
केराउमा हुने फाइबरको कारणले यीनीहरूको सेवन तौल घटाउनको लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । केराउले साहाकारीहरूको भोजन डाइटमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्दछ । यसको सेवन गर्दा तौल घटाउन पनि मद्धत गर्दछ महिलाहरुमा उत्पादन हुने विभिन्न प्रकारका हर्मोनलाई केराउ चनाले नियमित बनाउँछ । नियमितताले छातिको क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ ।रक्तअल्पताको हेरचाहा केराउमा हुने फलाम तत्वको कारणले रक्तअल्पता हुने सम्भावना कम हुन्छ ।राउमा हुने फाइबरका कारण अपच हुने समस्या कम हुन्छ । यसले स्वस्थ पाचन प्रणालीलाई विकास समेत गर्दछ ।
तोरीको साग खानुका फाईदाहरु
काठमाडौ । तोरीको साग स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ
काठमाडौ । तोरीको साग स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो प्राय धेरै जसो मानिसको भान्सामा पाकिने तरकारी पनि हो । यो गाउ घरमा सहजै रुपमा छरेर साग खान सकिन्छ । यसको सेवन गर्दा विभिन्न किसिमका रोगबट बच्न सकिन्छ । तोरीको तेल खादा पनि हामि स्वास्थ हुन्छौ । यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागी लाभदाएक छ ।
यसकारण रातको समयमा फलफुल खानुपर्छ
काठमाडौं । रातको समय अचानक भोक लागेमा के खाने गर्नुभएको छ रु यस्तो वेला भोक
काठमाडौं । रातको समय अचानक भोक लागेमा के खाने गर्नुभएको छ रु यस्तो वेला भोक मेटाउन तपाईंले चकलेट वा स्न्याक्सको सहारा लिइरहनुभएको छ भने गलत गर्नुभएको छ ।
किनकि, रातको समय अत्यधिक सुगर र क्यालोरीयुक्त स्न्याक्स प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा खराब असर पर्न सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्यका लागि यस्तो समयमा फलफूल प्रयोग गर्दा निकै लाभदायक हुन्छ । तपाईंले डिनर गरेको केही समयपछि हरेक दिन फलफूल प्रयोग गर्दा पनि राम्रो हुन्छ ।खाना र फलफूल एकैपटक प्रयोग गर्दा पचाउन समस्या हुन्छ ।
खानासँगै फलफूलको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले खाना र फलफूल खाने समयको बीचमा ग्याप हुन जरुरी छ । सुत्नुअघि फलफूलको प्रयोग गर्दा आवश्यक पोषण तत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । फलफूलबाट भिटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल र फाइबरको मात्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ फलफूलमा क्यालोरीको मात्रा हुन्छ । जसका कारण मानिसको तौल बढ्दैन ।
काठमाडौं । नीममा रहेका गुणहरूले अनेकौं रोगको उपचार काम गर्छन् । यसका औषधीय गुणका कारण
काठमाडौं । नीममा रहेका गुणहरूले अनेकौं रोगको उपचार काम गर्छन् । यसका औषधीय गुणका कारण आयुर्वेदमा यसको प्रयोग हजारौं वर्षदेखि हुँदै आइरहेको छ ।
नीमलाई संस्कृतमा अरिष्ट भनिन्छ जसको अर्थ लाग्छ श्रेष्ठ, पूर्ण र कहिल्यै खराब नहुने ।नीममा मधुमेह, क्यान्सर, मुटुरोग, एलर्जी लगायतका कैयौं रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । आयुर्वेदमा यसलाई सर्वरोगनिवारिणी भनिएको छ ।नीमको पातले मानसिक रोग, दन्तरोग, छालाको रोग लगायत धेरै रोग निको पार्छ ।
तपाईंले घरमा नीम रोप्नुभएको छ भने तपाईंमा यसको राम्रो प्रभाव पर्छ ।नीमले तपाईंको शरीर प्रणालीलाई सफा राख्छ । यसले गर्मी पैदा गर्छ र शरीरमा तीव्र एवं प्रचण्ड ऊर्जा उत्पन्न गराउँछ ।
नीमका डाँठ, जरा, बोक्रा र फल सबैमा शक्तिवर्द्धक तत्व विद्यमान हुन्छन् अनि रोगविरुद्ध लड्छन् ।यसको बोक्रा विशेषगरी औलो र छालासम्बन्धी रोग निको पार्नका लागि उपयोगी हुन्छन् ।मको एक पातमा १५० भन्दा धेरै रासायनिक प्रबन्ध हुन्छ । यस धर्तीमा पाइने पातहरूमा नीमको पात नै सबैभन्दा जटिल हुन्छ ।
मुटु रोग देखि अन्य रोगको अचुक औषधि दालचिनी, यस्ता छन् अन्य फाइदाहरु
सर्पको टोकाइबाट सजिलै बच्ने उपाए
काठमाडौं । गर्मी सुरुभएपछि धेरै मानिसले अकालमा सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् । विषालु
काठमाडौं । गर्मी सुरुभएपछि धेरै मानिसले अकालमा सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् । विषालु सर्पको टोकाइबाट विशेषगरी तराई क्षेत्र का मािनसले ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।सर्पदंश नेपालमा जनस्वास्थ्यका लागि ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । यसको समयमै निक्योल हुन नसके आँउदो वर्षहरुमा पनि सपैले टोकेर अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने हुन्छ ।त्यसैले सर्पको टोकाइबाट हामी आँफैपनि सचेत हुन पर्छ ।
जस्तै हामी राति अँध्यारोमा हिँड्दा सजग हुनुपर्छ । सकभर बत्ती बालेर वा लौरो टेकेर हिँड्नुपर्छ । भुइँमा सकभर नसुत्ने र सुतेमा अनिवार्य झुल लगाउने बानी गनुपर्छ । सर्प हुन सक्ने ठाउँबारे बालबालिकालाई सचेत गराउनुपर्छ । त्यस्तै, बिषालु सर्पको टोकाइबाट हुन सक्ने समस्याबारे जानकारी दिएमा यसबाट बँच्न सकिन्छ ।
घर तथा खेल मैदानवरिपरि सफा राख्ने तथा झाडी, ढुंगा, हिलो तथा पातको थुप्रो बनाए राख्नु हुँदैन सजले सर्प बसेको थाहा नहोस ढुंगा वा कुनै वस्तु थुपारेर राखेको ठाउँमा काम गर्दा सजग हुन पर्छ ।
त्यस्तै यदि सर्पले टोकी हालेमा सर्बप्रथम बिरामीलाई शान्त पर्ने काम गर्नुपर्छ । बिरामीलाई सजिलोगरी सुताइ टोकेको ठाउँवरिपरि प्रेसर ब्यान्डेज लगाउने
घाउ बढी नचलाउने । टोकेको ठाउँमा रबर वा डोरीले कडा गरी बाँध्नुहुँदैन, ताकि रक्तसञ्चारमा अवरोध नआओस् ।सकेसम्म छिटो स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ । बिरामी सम्हालिन गाह्रो हुने भएकाले साथीसँग जानु पर्छ ।
नरिवलको तेलबाट सजिलै घटाउन् सकिन्छ मोटोपना
काठमाडौ । मोटो शरीर रोगको घर हो । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, मुटु सम्बन्धी रोगहरु,
काठमाडौ । मोटो शरीर रोगको घर हो । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, मुटु सम्बन्धी रोगहरु, क्यान्सर तथा मृगौलाको समस्यालगायतका रोगहरु मोटा मानिसहरुमा बढि लाग्ने रोग हो । मोटोपन घटाउन विभिन्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । यसको लागि व्यायाम तथा कसरतहरु गर्नु अति उपयुक्त हुन्छ ।
योगाले पनि मोटोपना घटाउन मद्यत गर्छ । त्यसको साथसाथै आफ्नो जीवनशैलीमा तथा आहार विहारमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।तर मोटोपनाको समस्या समाधान गर्नको लागि काचो नरिवलको तेल पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ काचो नरिवलको तेल नियमित रुपमा र सही तरिकाले प्रयोग गर्दा एक महिनामै पौने ३ किलोसम्म तौल कम गर्न सकिन्छ ।
नरिवलको तेल कम फ्याट्टी एसिड पाइने भएकाले खाना पनि सजिलै पच्छ । नरिवलको तेल मध्यम खालको ट्राइग्लिसराइड लोरिक एसिडबाट बन्छ, यो एक आवश्यक फ्याटी एसिड हो ।
जोर्नीको समस्यामा मात्र नभई अन्य रोगको पनि अचुक औषधी भुइँकटहर
काठमाडौ । भुइँकटहर स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिके फाइदा जनम मानिन्छ ।
भुइँकटहरले ह्दयसम्बन्धी रोग तथा क्यान्सरजस्ता रोगबाट जोगाउँछ । भुइँकटहरले आँखाको क्षमता बढाउँछ ।भुइँकटहरमा सोडियम कम तथा पोटासियम बढी पाइन्छ, जसले गर्दा शरीरमा रक्तचाप सन्तुलित हुन्छ ।
भुइँकटहरमा पाइने केही इन्जाइमले पाचनसम्बन्धी समस्याबाट जोगाउँछन् । भुइँकटहरको नियमित सेवनले हात–गोडाको नङ फुस्रो हुने समस्या समाधान हुनुका साथै तौल पनि घट्छ ।
भुइँकटहरमा फाइबर, पोटासियम, फोस्फोरस, क्याल्सियम, भिटामिन सी आदि तत्व पाइन्छन् । दाँतका रोगीका लागि भुइँकटहर निकै उपयोगी सावित हुन्छ । भुइँकटहर खाँदा जोर्नीको समस्यामा फाइदा मिल्छ ।
बेल खानुका आश्चर्यजनक फाइदाहरु
टिमुर खानुका फाइदाहरु
काठमाडौं । टिमुर स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ ।
काठमाडौं । टिमुर स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । आयुर्वेदिक प्रणालीअनुसार टिमुर वायुशमन गर्ने प्रकृतिको हुन्छ । यसको प्रयोग दाँत दुखेको निको गर्न र तागत दिने औषधिको रूपमा हुन्छ ।
ज्वरो आउँदा, झाडाबान्ता र हैजाले सताउँदा टिमुर सेवन गर्दा उपयोगी हुन्छ ।टिमुरको धुलो अचार वा चटनीमा मिसाएर खाँदा तथा मासुमा मसलाको रुपमा प्रयोग गर्दा फाइदा मिल्छ । खानामा नियमित टिमुरको मात्रा मिलाउँदा शरीरमा ताप प्राप्त हुन्छ । जोडो मौसममा बढी लाभदायी हुन्छ ।
हाडजोर्नी दुख्दा, पेट दुख्दा र लेक लाग्दा ९हाई अल्टिच्युड०को औषधिका रूपमा समेत टिमुरको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।धुनिक औषधि विज्ञानले समेत टुथपेस्टलगायतका औषधिको निर्माणमा टिमुर प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
घाँमले डढेको छालालाई यसरी गर्नुस उपचार
काठमाडौं । तपाईलाई कुन महिना मन पर्छ ? जाडो वा गर्मी । कतिलाई गर्मी महिनामा
काठमाडौं । तपाईलाई कुन महिना मन पर्छ ? जाडो वा गर्मी । कतिलाई गर्मी महिनामा घाँमले छाला कालो बनाउने डरले गर्दा गर्मी महिना मन नपराउने गर्छन् । चर्को घाँमको कारणले गर्दा छाला कालो हुने गर्दछ । गर्मी महिनामा चर्को घाँमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज बताउन गईरहेका छौं ।
काँचो दुधलाई एउटा नरम कपडाले अनुहारमा लगाएको खण्डमा अनुहारको छालामा चमक आउछ । दुधलाई छालामा लगाएको खण्डमा यसले छालालाई घाँमबाट बचाउँछ । छालालई घाँमबाट बचाउनको लागी घ्युकुमारी सँग मह मिसाएर लगाएको खण्डमा पनि छालालाई राम्रो हुन्छ । यदि तपाईको छाला निकै डढेको छ भने नरिवलको तेल लगाउन सकिन्छ । नरिवलको तेल जति राम्रो हुन्छ त्यतिनै यसले डढेको छालालाई समेत राम्रो गर्दछ ।
एभोकाडो खानुका फाईदाहरु
काठमाडौं । तपाईले एभोकाडो खानु भएको छ रु यो बजारमा सजिलै पाउने फल हो ।
काठमाडौं । तपाईले एभोकाडो खानु भएको छ रु यो बजारमा सजिलै पाउने फल हो । यसलाई अन्य परिकारसँग पनि मिसाएर खान सकिन्छ । एभोकाडोको सेवनले शरीरलाई कस्तो फाईदा पूर्याउछ भन्ने कुरा आज बताउन गईरहेका छौं ।
एभोकाडोको सेवनले मुटु तथा आँखालाई स्वस्थ्य राख्ने काम गर्दछ । यसले हाम्रो शरीरको कोलस्टोरको मात्रालाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्दछ जसले गर्दा हाम्रो मुटु स्वस्थ्य रहन्छ । एभोकाडो मात्रा मिलाएर खाएको खण्डमा यसले हाम्रो शरीरलाई क्यान्सर हुनबाट जोगाउछ । यसले पाचन प्रणलीलाई समेत ठिक ठाउँमा राख्ने काम गर्दछ । दिनको एउटा सेवन गरेको खण्डमा यसले डिप्रेशनको रोगीलाई समेत ठिक पार्ने गर्दछ ।
काठमाडौं । हामिलाई लाग्छ तुलसीलाई मठमा पुजा गर्नको लागि मात्र रोप्ने गरेका छौ धार्मिक मान्यताअनुसार
यस्ता छन् तितो बर्रो खानुका फाईदाहरु
काठमाडौ । बर्रो स्वादमा तितो भएता पनि यो स्वास्थका लागि उतिकै महत्व पसुर्ण छ ।
काठमाडौ । बर्रो स्वादमा तितो भएता पनि यो स्वास्थका लागि उतिकै महत्व पसुर्ण छ । बर्रो आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा प्रयोग हुने गर्दछ । यो पेट देखेमा धुलो बनाएर खादा पेट दुखेको निको भएर जान्छ । बर्रो ११ सय मिटर उचाइमा रहेको तराई तथा भित्री मधेसका जंगलमा पाइने गर्छ । वैशाख–जेठमा फुल्ने बर्रो पतझर बिरुवामध्येमा एक पर्दछ । यसका विभिन्न औषधीय गुण हरु पाइन्छ । बर्रो कब्जियत रोगीका लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ ।
दाँत वा गिजासम्बन्धी रोगको औषधि बर्रोको फलबाट बनाइन्छ । बर्रोको बियाँबाट निकालिएको तेल छालाको रोगका लागि उपयोगी हुन्छ । बर्रोको फल दम र खोकीका बिरामीका लागि लाभदायी हुन्छ ।बर्रोले मूत्रजलनलगायत मूत्रसम्बन्धी विकार हटाउन मद्दत गर्छ । चिसो पानीमा बर्रोको चूर्ण भिजाइएको पानीले बिहान उठेर आँखा धोएमा आँखाको ज्योति बढ्छ । तयसैले बर्रोको सेवन गर्दा यस्ता रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
सतो दुबिको यसरी गर्न सकिन्छ उपचार
काठमाडौ । कतिपय मानिसहरु छालामा सेतो दुबि आएर हैरान पर्नु भएको छ । धेरै व्यक्तिहरुले
काठमाडौ । कतिपय मानिसहरु छालामा सेतो दुबि आएर हैरान पर्नु भएको छ । धेरै व्यक्तिहरुले यसको उपचार छैन होला भनेर वाक्क पर्नु भएको होला पक्कै पनि । सेतो दुबि आफ्ैमा रोग होईन यो त छालामा देखिने एक प्रकारको बिकार हो । सेतो दागको रूपमा देखिने उक्त दुबीलाई चिकित्सकीय भाषामा ल्युकोडर्मा भनिन्छ । कालो र गहुँगोरो छाला भएका मानिस बस्ने अफ्रिकी तथा एसियाली देशमा यस्तो समस्या बढी हुने गरेको पाइन्छ ।
नरिवल पानीको सेवनले पेट दुख्ने र यि समस्याको समाधान हुन्छ
काठमाडौं । तपाईको पेट दुख्छ रु खाना खाने समय नियमित नभएमा पेट दुख्ने गर्दछ ।
काठमाडौं । तपाईको पेट दुख्छ रु खाना खाने समय नियमित नभएमा पेट दुख्ने गर्दछ । पेटको समस्याले मानिसको शरीरलाई बर्बाद पार्छ । पेट दुख्ने, फुल्ने, ग्यास्ट्रिक बढ्ने, पातलो दिसा हुने, गोटा पर्ने , शरीरमा पानीको कमी हुने पेटको समस्याको संकेत हुन। पेटको समस्या देखा परेमा कस्तो खानेकुराको सेवन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज बताउन गईरहेका छौ ।
पेट दुख्छ ? यी खानेकुरा खानुस् छिट्टै निको हुन्छ
काठमाडौं । तपाईको पेट दुख्छ र? जङ्क फुड र खाना खाने समय नियमित नभएमा पेट
काठमाडौं । तपाईको पेट दुख्छ र? जङ्क फुड र खाना खाने समय नियमित नभएमा पेट दुख्ने गर्दछ । पेटको समस्याले मानिसको शरीरलाई बर्बाद पार्छ । पेट दुख्ने, फुल्ने, ग्यास्ट्रिक बढ्ने, पातलो दिसा हुने, गोटा पर्ने , शरीरमा पानीको कमी हुने पेटको समस्याको संकेत हुन। पेटको समस्या देखा परेमा कस्तो खानेकुराको सेवन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज बताउन गईरहेका छौ ।
पाचन प्रणालीमा असर देखिएपछि पेट दुख्ने गर्छ । पेट दुखेको बेलामा दहिको पनि सेवन गर्न सकिन्छ । दहिमा पाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने ब्याक्टेरिया हुने भएको कारणले गर्दा यसको सेवनले शरीरलाई फाईदा गर्छ । पेट दुखेको बेलामा मेवाको पनि सेवन गर्न सकिन्छ । मेवामा प्रसस्तै मात्रामा इन्जाइम हुने भएको कारणले गर्दा यसको सेवनले पेट दुख्न कम हुन्छ ।
स्ट्रबेरी खानुका फाईदाहरु
काठमाडौं । तपाईलाई स्ट्रबेरी कतिको मन पर्छ रु स्ट्रबेरी सबैलाई मन पर्ने फल हो ।
काठमाडौं । तपाईलाई स्ट्रबेरी कतिको मन पर्छ रु स्ट्रबेरी सबैलाई मन पर्ने फल हो । यसको स्वाद गुलियो हुन्छ । स्वास्थ्यको हिसाबले पनि स्ट्रबेरी निकै फाईदाजनक रहेको छ । यसको सेवनले शरीरमा लाग्ने सबै प्रकारका रोगहरु हटेर जान्छ । यसले क्यान्सरसँग लड्ने क्षमतामा बृद्धि गराउछ । स्ट्रबेरीको सेवनले शरीरलाई कस्तो कस्तो फाईदा गर्छ भन्ने कुरा बताउन गईरहेका छौ ।
स्ट्रबेरीको सेवनले आँखालाई फाईदा गर्छ । आँखामा हुने कन्ट्राक्टिङको समस्यालाई समाधान गर्ने काम स्ट्रबेरीले गर्छ । यसमा प्रसस्तै मात्रामा भीटामिन सी हुने भएकाले गर्दा यसले शरीरमा इम्युनिटी पावर बढाउन मद्धत गर्छ ।
यसको सेवनले छालालाई राम्रो बनाउँछ । यसले छालालाई सफा, मुलायम र नरम बनाउने काम गर्छ । यसले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा बृद्धि गर्छ । यसको सेवनले क्यान्सरसँग लड्न सक्ने क्षमतामा बृद्धि गराउँछ ।